Qaamuuska ereyga 'Gemology' - Qaamuuska ereyada dhagxaanta
Qaamuuska ereyga Gemology
hababka orthorhombic, monoclinic iyo triclinic waxaa jira seddex faasas oo loo yaqaan 'crystal fails' oo dhererkoodu kala duwan yahay. Kala-sooc laba-laab ah ayaa ka dhici doona jihooyinka badankood, laakiin waxaa jiri doona laba faasas indhaha (jihooyinka hal-laabashada) oo ku kala duwan jihada nooc kasta oo jawharad kala duwan ah. macdanta ka tirsan nidaamyadan waxaa loo yaqaan 'biaxial'. (Nidaamka loo yaqaan 'orthorhombic system' faasaska indhaha ayaa si isku mid ah ugu janjeedha 'c' (mowduuc toosan oo mabda 'ah), halka monoclinic iyo triclinic uusan jirin xiriir toos ah oo ay la leeyihiin faasaska madadaalada.)
Saameyn milicsi oo ka timaadda ka-mid-noqoshada is-barbar socda ama (indhaha bisadda). Halbeegga iftiinka ayaa u muuqda xaglo qumman dhinaca jihada ka mid ahaanshaha waxaana si fiican loogu arkaa hal il oo dusha sare ah dhagxaan la jaray en cabochon
(wakiilka midabaynta). Qaybta mekulka ee mas'uulka ka ah midabka isku dhafan. Waxay ku jirtaa sidii qayb muhiim ah oo ka kooban walxaha kiimikada ee dhagxaanta idiochromatic ama sida shil wasakh ah ee dhagxaanta allochromatic
aragti muuqaal ah oo laga helayo qeybaha laydh cad lagu kala saari karo (casaan, oranjo, jaalle, cagaar, buluug, violet) iyo waliba dareenka guduudka oo aan laga helin qorraxda. Midabka waxaa lagu sifeeyaa midabka, dhererka iyo codka. Midabka jirka ee dhagaxa qaaliga ah waxaa laga soo dheegtay iftiinka lagu arko sidoo kale waxaa sabab u ah dhuuqista dherer dherer gaar ah oo iftiinka muuqda ah. Midabka sidoo kale waxaa sababi kara kala firidhsan, faragelinta nalka iyo nalka
buuxin sida geedka oo kale ah ama sida mooska oo kale oo dillaac ah (halkaas oo ay ku jiraan waxyaabo kala duwan oo laga yaabo in ay jebiyaan - caadi ahaan birta xabagta.)
si looga qaado dhalaalka dhalada iyo transluceny. (Marka laga hadlayo alaabada dhalada ah ee loo yaqaan meta meta - waa horumarinta kobcinta dhagxaanta)
kala firidhku waa kala soocidda (kala-goynta) iftiinka cad ee u dhexeeya midabada muuqaalka ah iyadoo la sifeynayo (foorarsiga iftiinka) maaddaama nalku ka gudbayo laba dusha oo u janjeera. Dhagxaanta waxaa badanaa loo yaqaan 'dab'
anisotropic - macdanta soo bandhigeysa astaamaha guryaha indhaha (tusaale, dhagaxyada ku jira tetragonal, trigxxxonal, orthorhombic, monoclinic iyo triclinic systems)
adkaanta waa awoodda macdantu leedahay inay iska caabbiso xoqida (abrasion). Sidoo kale eeg miisaanka Moh
hue waxaa loola jeedaa magaca midabka laftiisa: dareenka muuqaalka saafiga ah ee casaanka, oranjiga, jaallaha ah, cagaar, buluug, buluug ah iyo kala duwanaanshaha kuwan Hue sidoo kale waxaa loola jeedaa dareenka guduudka (u dhexeeya casaanka iyo violet), oo aan laga helin qorraxda
si dabiici ah u dhaca luul biyo macaan oo aan nukliyeer ahayn oo ku samaysma jumlad marka lagu celiyo biyaha ka dib marka laga saaro dalag luul luqadaysan oo aan nukliyeer ahayn. Kuwani waa inaan lagu qaldin pearis abuurka badda oo badanaa aad u yar. Biyaha macaan ee `` keshi '' waxaa kaliya loogu yeeraa maxaa yeelay iyaguna sidoo kale kama koraan nukleus macmal ah. Mararka qaarkood waxaa loo yaqaan luul 'seedless' si ay u kala soocaan la non-nucleated. Sidoo kale eeg luul Biwa
Jabaanku waxay ugu yeeraan luul abuur 'keshi' (poppies). Ururku halkan wuxuu udhaxeeyaa cabirka yar ee iniinyaha iniinyaha iyo luul aad uyar oo dabiici ah
ereyga guud ee bixinta iftiinka 'qabow' ee muuqda walax marka la helo tamar siyaado ah qaab ama qaab kale. Shanta mabaadi'da ifafaalaha ifka waa: chemi-luminescence (natiijada isbadelka kiimikada), tribo-luminescence (soo saaray khilaaf), thermo-luminescence (soo saaray kuleylka), photo¬luminescence (soo saaray shucaac muuqda ama aan la arki karin ee tamar sare / gaaban dhererka dhererka) iyo cathodoluminescence (natiijooyinka ka soo baxa kicinta leh dogob elektaroonig ah oo ku jira qolka faaruqinta)
hal mitir carat = shan meelood meel garaam (0.20gr) ama 200 milligram (mg). Carat metric waa halbeega miisaanka dhagxaanta dhagaxaanta iyo luul dhaqameed. Miisaanka waxaa lagu muujiyey laba meelood jajab tobanle jajab tobanlaha badiyaa si dabacsan ayaa loo yaqaan 'dhibco', ie, 1 metric carat = 100 dhibcood
Ka-mid ahaanshaha horay u jiray: kuwii joogay kahor meeraha martida loo yahay inay bilaabaan inay sameystaan ​​oo ay laquuqaan 'diyaar loo sameeyay' qeybta dambe (tusaale ahaan, walxaha adag iyo kiristaalo yaryar. qaabdhismeed
pseudomorph (qaab been ah) waa macdan qaadata qaab (qaab) macdan kale (ama walxo dabiici ah) kuleylka iyo / ama cadaadiska ama geedi socodka kiimikada awgood, tusaale, isha shabeelka (bedelka quartz ee crocidolite, macdanta asbestos); agate alwaax (bedelka quartz ee qoryaha)
milicsigu waa ku soo noqoshada dusha sare (ha noqoto mid dhexdhexaad ah ama mid dibadeed) qayb ka mid ah iftiinka ku dhaca dushaas. Sidoo kale eeg Sharciyada Snell
refraction waa isbeddelka jihada uu nalka u socdo marka uu ka gudbo hal warbaahin oo u gudbo mid kale oo cufnaan xagga indhaha ah (marka laga reebo marka uu ku garaaco dusha guud ee labada warbaahin 90 °). Markay iftiinka ka gudubto mid dhif ah una gudubto dhexdhexaad dhexdhexaad ah (tusaale ahaan, hawadu una wareegto dhagax) waxay u foorarsataa dhinaca caadiga ah, taa bedelkeed markay ka gudubto cufnaanta una gudubto dhexdhexaad dhif ah ayay ka laaban tahay ka caadiga ah. Cufnaanta indhaha waa hanti adag oo isku muujisa hoos u dhaca iftiinka. Sidoo kale eeg Sharciyada Snell
kuwa ay samaysteen dhismayaasha maaddadu (seddexaad) oo ka soo bilaabmay burburka jireed iyo kiimiko ee dhagxaanta horay u jirtay ee dhulka dushiisa
SG ama cufnaanta qaraabada walxaha ayaa ah isku dheellitirka u dhexeeya culeyska walax iyo culeyska isleeg mugga biyo saafi ah 4 ° C (cufnaanta ugu badan ee biyaha) iyo heerka cadaadiska cimilada. SG waxay la xiriirtaa walxaha kiimikada ee walxaha iyo sidoo kale isku xidhka isku xidhka (atomic atom) ee saamayntiisa kuma koobna oo kaliya culayska atomiga ee qaybaha kala duwan ee walxaha laakiin sidoo kale qaabka atamka la isugu keenayo)
nidaamka laba geesoodka, trigonal iyo tetragonal crystal waxaa ku yaal hal dhidib oo indhaha ah (jihada hal shaandheyn): macdanta ka tirsan nidaamyadan waxaa loo yaqaan uniaxial (dhagaxyada uniaxial xariiqda optic waxay la mid tahay aasaaska tooska ah ee 'c' axis)